Fitaovam-piadiana ao an-trano - Ikkaro
Manokatra fizarana antsoina Fitaovam-piadiana vita an-trano Fanapahan-kevitra sarotra izany. Tsy tia ady isika tsy voasinton'ny herisetra isika fa rehefa avy nandinika ny lahatsoratra Ikkaro izahay dia nahatsapa fa nandritra izay taona maro izay dia niatrika fampahalalana marobe momba ny tsipìka vita an-trano, basy ary fitaovam-piadiana ao amin'ny birao izahay. Tsy fitaovam-piadiana hampiasaina, na pistola na basy submachine, fa rehefa manasokajy azy ireo izy ireo, na dia maharary antsika aza izany
Tsy mila olona manao fitaovam-piadiana hanao ratsy isika, fa mila mandany fotoana amin'ny namana, toy ny olona milalao zana-tsipìka, satria mitifitra tsipìka na mpanipy pensilihazo izy ireo. Ny ankamaroan'ireo entana ao amin'ity fizarana ity dia manao fitaovam-piadiana izay azo raisina ho toy ny kilalao, mpandefa vola madinika, catapult clip, na basy gauss misy andriamby ankizy. Curiosities tsotra.
Noho izany, aza mijery an'ity fizarana ity raha tsy zavatra fialamboly tsotra na mihoatra ny fahalianana tsotra fotsiny hahitanao ny fomba fiasan'ny rafitra iray. Iza no mbola tsy nilalao mpamono dragona? Sa efa natao tsorakazo sy tady ny tsipika? Sa poa-basy manipy baolina taratasy any an-dakilasy? Tompokolahy, fitaovam-piadiana ireo, fitaovam-piadiana vita an-trano, andao hadinontsika ny dikan'ny teny ratsy.
Tsy mino aho fa ity fampahalalana ity dia mandrisika ny olona rehetra hanao fitaovam-piadiana ary hampiasa azy io amin'ny fomba ratsy satria saika ny zavatra rehetra azo ampiasaina hanimba. Fa raha mahita lahatsoratra heverinao fa tsy mandeha amin'ny laoniny ianao dia mifandraisa aminay ary hodinihinay izany.
Ahoana ny fomba fametahana kodiarana bisikileta
Ho hitantsika eo ny fomba fanaovana andohalambo amin'ny sisin'ny kodiarana bisikileta. Amin'ny fitsipika dia tsy ho tsipika mahery vaika izy io, fa ilaina ny afaka mampiasa azy amin'ny halavirana 20 metatra, ary afaka miala voly miaraka amina tanjona.
Amin'ny maha zaza ahy dia Zana-tsipìka am-polony no nataoko, miaraka amin'ny sampana sy hazo ary plastika isan-karazany. Ny fampiasana tady, fantsom-bisikileta, sns, saingy tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy ny nanao tsipìka toy izao. Ary manana kodiarana taloha aho izay efa fantatro izay ataony.
Ahoana ny fomba hanaovana catapult Trebuchet namboarina
Azo antoka fa tianao pitifirana, tian'ny rehetra izy ireo :) Ary raha vitantsika ny mampitombo azy ireo, tsara kokoa noho ny tsara kokoa.
Ity hitanao amin'ny sary ity dia a trebuchet catapult. Misy an-jatony fomba hanaovana ity catapult ity. Manomboka amin'ny maodely goavambe, toy ny fitaovam-piadiana nanafihana lapa an'ny medieval taloha ka hatramin'ny maodely kely sy tena an-trano
Ahoana ny fomba hanaovana zana-tsipìka kristaly
Tsotra ny teôria, na dia mieritreritra aza aho fa ho sarotra be izany amin'ny fampiharana.
Mampatsiahy antsika ny fomba io teknika io sokitra vato hahazoana zana-tsipìka ao amin'ny prehistory. Ary tena itovizany amin'ilay sary mampiseho antsika a zana-tsipìka obsidian antsoina hoe vera volkanika.
Araraoty ny fiolahana amin'ny fototr'ireo tavoahangy fitaratra ho an'ny endrik'ireo arrowhead. Tsy mila misafidy tavoahangy misy fotony ianao na ho marokoroko, na ho convex be.
Fomba fanamboarana tady misy tady legioma
Tiako ity horonantsary ity izay manazava aminay ny fomba fanaovana tady misy fibre legioma. Tsy ... Tohizo ny famakiana
Fomba fanamboarana antsy namboarina tamin'ny antsy tsofa taloha.
Araka ny hitanao dia fomba tsotra be izao ahazoana ny cantsy namboarina.
Rehefa manana iray isika faribolana tsofa hanariana, azontsika atao ny manamboatra azy io mba hahazoana antsy vitsivitsy amin'ny habe samihafa.
Fomba fanamboarana zana-tsipika volotsangana
Fotoana vitsy lasa izay dia nahita isika ny fomba fanaovana tsipìka ary manana maodely sasantsasany be mpijery indrindra izahay amin'ny fanoratana lahatsoratra.
Tsy hita anefa izany tsipika izany arrow. Amin'izao fotoana izao dia mazàna vita amin'ny tsorakazo fibre karbona izy ireo, saingy eto dia tianay haseho anao ny fomba fanaovana zana-tsipika nentim-paharazana amin'ny hazo volotsangana.
Ahoana ny fomba fanaovana basy mandefa baolina ping pong
Efa nahita karazana basy mandefa baolina pingpong. Fa androany dia endrika basy poleta kokoa, ejhehe
Ny sary dia manazava tsara ny fomba nananganana azy, noho izany dia tsy hamafisiko bebe kokoa. Avelao fotsiny ny sary miaraka amin'ny refy hanamorana ny asanao.
Fitaovam-piadiana ao amin'ny birao
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny famoronana isika fitaovam-piadiana any amin'ny birao u Fiadiana amin'ny birao. Fitaovam-piadiana izay azo foronina amin'ny kojakojam-birao mahazatra, clip an-taratasy, famafana, pensilihazo, fanamafisam-penina, sns. Tantano am-pitandremana tsara.
ATTENTION: Toy ny fitaovam-piadiana any amin'ny birao, dia mety hampidi-doza be izany ary hiteraka fahavoazana. Ampiasao am-pitandremana.
Catapult misy clip
Manomboka amin'ny fizarana amin'ny Fiadiana amin'ny birao o fitaovam-piadiana any amin'ny birao.
Amin'ity tranga ity dia asehontsika ny fomba fanaovana catapult misy clip sy fehikibo.
Ity iray ity catapult tsotra Misy ampahany roa izy io. Amin'ny lafiny iray ny fanohanana ary amin'ny lafiny iray hafa ny refy, izay hafanain'ny tarika elastika
Andao hojerentsika ny fananganana ny fanohanana amin'ny sary tsotra roa
Fomba fanamboarana pensilihazo
Ilainay ity maodely mahaliana ity hananganana a birao boribory misy pensilihazo, penina ary fehin-kibo 7.
Vakoka iray hafa voasokajy ho fitaovam-piadiana any amin'ny birao.
Basy vita amin'ny rivotra vita an-trano
Ny andro iray hafa dia namela horonan-tsary momba ny fomba fanaovana basy vita an-trano tsikelikely izahay
Androany izahay dia manitatra amin'ny horonan-tsary mahaliana vitsivitsy
Modely 3D an'ny basy.
Fananganana basy vita amin'ny rivotra voafintina amin'ny faritra telo: